Thola okuhamba phambili kwamazwe womabili nge-Yammer ngebhizinisi lakho
NgoMgqibelo, Juni 23, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngaphambi kwengxoxo yethu ngoLwesihlanu noHarold Jarche, bengingakaze ngizwe ngaleli gama ukusebenza. Kusukela ngoSepthemba odlule, inkampani yethu yezentengiso engenayo ibilokhu iqinisekisiwe ROWE emsebenzini. I-ROWE yi-Results Only Work Environment… lapho abasebenzi banikwa amandla okusebenza ngendlela abafisa ngayo inqobo nje uma izidingo zomsebenzi seziphothuliwe.
Njengeqembu elincane, inselelo eyodwa esinayo neROWE ukuxhumana nabanye. Abanye bethu baphendula nge-imeyili, abanye ngocingo, kanti abanye akunjalo (njengami!). Lapho ngiphansi emsebenzini wami, ngikuzonda ngokweqiniso ukuphazamiseka. Kepha lokho akulungile kumakhasimende ami noma engisebenza nabo… kwesinye isikhathi abazama ukungilandela.
UDavid uzibonile izingqinamba nezinye izinhlangano ezilahlekelwa wukhiqiza kuma-imeyili amaningi nasemihlanganweni eminingi kakhulu… engavumeli abasebenzi ukuthi bafeze imisebenzi esondele. Uthe ezinye izinhlangano seziphendukele kwi-Workstreaming. Kalula nje, i-Workstreaming inikeza indlela yokuxhumana engaphazamisi kubasebenzi kepha ivumela labo osondelene nabo ukuthi baqonde ukuthi usebenza ini, lapho ungadinga khona usizo, nokuthi ulindele nini imiphumela. Kubonakala sengathi Yammer kungaba ithuluzi elihle lalokhu!
I-Yammer kulula ukuyisebenzisa kepha inamandla uhlelo lokusebenza lwe-micro-blogging oluxhuma abantu nokuqukethwe esikhathini nesikhathi. Isebenza ngokufana ne-Facebook noma i-Twitter, umehluko ukuthi ngenkathi i-Facebook ibhekela indawo esesidlangalaleni, i-Yammer isebenza kuphela ebhizinisini, ivumela amabhizinisi ukuthi enze ngokwezifiso isoftware yokuxhumana nabantu esebenzisa ukuxhumana nabantu, abalingani besiteshi, amaklayenti nabanye ngenani uchungechunge.
Indawo yokuxhumana yangasese efana neYammer inikeza inzuzo eningi yenkampani. Ibandakanya futhi inike amandla abasebenzi, isheshise izinqubo zomsebenzi, ithuthukise umkhiqizo futhi ibhebhethekise izindlela ezintsha. Futhi imiphumela icishe isheshe. Isibonelo, i-Yammer inikeza ithuluzi lokusebenzisana elingaguquguquki nelisebenza kahle lokuxhuma ithalente nobuchwepheshe obusabalale emhlabeni wonke kuthimba lokuthengisa nelokumaketha, okubavumela ukuthi bazibandakanye kumasu futhi baqalise imikhankaso ngokukhululekile.
Okukhathazeka kakhulu ngezingosi zokuxhumana nabantu ukuphepha kwemininingwane. Ngephuzu elilodwa likaYammer lokwehlukanisa (ngaphezu kwe-Facebook nezinye izingosi zokuxhumana zomphakathi, okungukuthi) ukuba yimfihlo nokuphepha kwedatha, ingosi iya ngaleyo mile ukuqinisekisa ukuphepha okuphezulu. I-Yammer ihlanganisa ukubuyekezwa kwezokuphepha kudizayini, izibonelo, nezigaba zokusatshalaliswa. Konke ukuxhumana kudlula nge-SSL / TLS, futhi idatha igeleza ngamasango okuvikela okunengqondo osezingeni eliphansi ukuvimbela ukuvuza kuwo wonke amanethiwekhi. Amaseva wohlelo lokusebenza lewebhu ahlala ngokomzimba nangokunengqondo ahlukaniswe namaseva wedatha. Lezi zivikelo, kanye nokunye ukusebenza kokusebenza kokugaya okufana nokugadwa kwewashi lewashi, ukukhiya kwe-biometric kanye nephini, izilawuli eziqinile zokufinyelela kwabasebenzi, izingodo ezinemininingwane yokungena kwezivakashi, izinqubomgomo zokungena ngemvume ezilodwa kanye nezinqubomgomo zephasiwedi ezivikelekile, ukuqinisekiswa okuqinile nokuningi kuqinisekisa okuphezulu notch ukuphepha.
Buyela Ekusakazweni Kokusebenza. Ngokuya ngezingqinamba zezinto eziseqhulwini esizibeke eqhulwini, amashejuli, izindawo nemisebenzi esetshenziswayo… ukusebenzisa iYammer kungaba yindlela enhle yokuthi sonke sigcine umkhondo omunye komunye. Esikhundleni sokuthi ngibize umqambi wami, ngingavele ngibheke i-Yammer ngibone ukuthi wenzani noma ukuthi angatholakala nini! Lokhu akusizi nje kuphela ebhizinisini elincane… cabanga ukuxhumana okwandisiwe nokwehliswa komsindo ibhizinisi elingaba nalo futhi!
U-Yammer naye unakho kokubili ideskithophu nezinhlelo zokusebenza zeselula kuyatholakala, ukuhlanganiswa kwe-Skype, kanye nethoni lezinye izici.
Tags: ukuxhumana nomphakathiukusebenzayammer
Jun 25, 2012 ku-4: 15 PM
Izindaba ezithakazelisayo namuhla ukuthi iMicrosoft ithenge iYammer. Ngicabanga ukuthi yisinyathelo esihle lesi!
Jun 26, 2012 ku-10: 49 PM
Kufanele ngithi - ngikujabulela kakhulu ukusebenzisa leli thuluzi. Konke engangikudinga kwakuwukuphusha. Ukwehlisa ama-imeyili, kugcina osebenza nabo bazi, futhi kugcina amaphrojekthi ehlolile. Kufana ne-Facebook, kepha kuphela indawo yokusebenza!